အားလုံးပဲ မင်္ဂလာဆောင်ပါ...အဲမှ& — MYSTERY ZILLION
August 2007 edited September 2007 in မိတ်ဆက်
ကျွန်တော်နာမည် စ`သန်း ပါ။ထိုင်းန်ိုင်ငံမှာ မျက်စိလည်လမ်းမှားရောက်လာပြီး၊ ဒီက MYSTERY ZILLION SITE မျိုးကိုတော့ လိပ်ဥတူးသလို လိုက်ရှာတဲ့သူပါ။MYSTERY ZILLION ကို အင်တာနက်လှိုင်းစီးတိုင်း မကြာခဏဆိုဘဲ ဒီဆိုက်ကပေးလိုက်တဲ့ နည်းပညာအသီးအပွင့်တွေကို စားသုံးဆွတ်ခူးနေတဲ့ သူပါ။ computer hacker ဖြစ်ချင်နေတဲ့သူပါ။ဒီဆိုက်ကို မကြာခဏ၀င်ဖြစ်ပေမယ့်
MYSTERY ZILLION အဖွဲ့သူ/အဖွဲ့သား နှင့် တကွ၊ ဒီဆိုက်ကို၀င်သွားကြသူများအားလုံးကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ... Mysteryzillion Forum မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ ....
Sure guy, Life is unfair.I feel the same too.We must rebel that.
Did u ever read "Animal Farm"Book?I enjoy that book very much.If u don't u must.
Ok,however i just want to say Life is unfair!!!